बाढि प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षणका लागि कैलाली पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा विमानस्थलबाटै फर्किए « रिपोर्टर्स नेपाल
(Wednesday 20th October 2021)
बाढि प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षणका लागि कैलाली पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा विमानस्थलबाटै फर्किए
प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७४, बिहीबार
नवराज खनाल कैलाली ,भाद्र १ । बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागी कैलाली पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढी प्रभाबित क्षेत्रमा नपुगी टीकापुर विमानस्थलमा कार्यक्रमम गरी फर्किएका छन् ।
बन्द रहेको टीकापुर एयरपोर्टको चौरमै बाढीको समस्या बुझेर प्रधानमन्त्री देउवा फर्किएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा बाढी प्रभाबित क्षेत्रमा नपुगी टीकापुरबाट फर्किएपछी कैलालीको भजनी नगरपालीका बाढी पीडीतहरु आक्रोसित भएका छन ।
आफु बसेको ठाउँमा आउलान र आफनो समस्या सुनाउला भन्ने आशामा बसेका बाढी पीडीतहरु प्रधानमन्त्री देउवा टीकापुरबाटै फर्कीएपछी भजनी नगरपालीका बाढी पीडीतहरु आक्रोसित भएका हुन ।
आज बिहानैदेखी प्रधानमन्त्रीलाइ भेट्न बाढी पीडीतहरु एक ठाउँमा जम्मा भएका थीए । बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत् अवलोकन नगरीकन प्रधानमन्त्री फर्किएपछी आफुलाइ निकै दुःख लागेको भजनी नगरपालीकाका बाढी पीडीतहरुले बताएका छन ।
बाढी पीडीतहरुले आश्रय लिइरहेको स्थान हुलाकी सडक खण्ड पुग्ने सडक कालो पत्रे भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा बाढी पीडीतलाइ भेट्न जानुभएन ।
जनता सडकमा छन, हाम्रा प्रधानमन्त्री आकाशमै उडेर हाम्रो तमाशा हेरेर जाँदा नेताहरु प्रतिको बिश्वास नै उडेको अर्का बाढी पीडीतको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री आउने भनेपछी कैलालीका टीकापुर नगरपालीका, लम्कीचुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालीका लगायतका ठाउँका बाढी पीडीतहरुलेसमेत आफनो कुरा राख्ने भनेर आएका थिए ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी पीडीतको समस्याका बारेमा सरकार गम्भिर रहेको बताएका छन् ।
बन्द रहेको टीकापुर बिमानस्थलको चौरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राहतका लागी सरकार लागी रहेकाले चीन्ता नगर्न आग्रह समेत गरे ।
भजनीमा आइतबारदेखि हुलाकी सडकमा आश्रय लिइरहेका हजारौं परिवार अझै पनि घर फर्किन सकेका छैनन् ।
भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८, ३, ५, ९, २ र ४ बाढीबाट बढी प्रभावित भएका छन् । भजनीमा एघार हजार बढी जनसंख्या बाढीबाट प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ । वडा नम्बर ८ मा पाँच हजार, वडा नम्बर ३ मा दुई हजार पाँच सय, तथा वडा नम्बर ५, ९ र २ मा गरी तीन हजार बढी र वडा नम्बर ४ मा पाँच सय बढी जनसंख्या प्रभावित भएका छन् ।
‘गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा म त फेरि केपी ओलीको पूनरावृत्ति हुने देख्छु’ : डा. सुरेन्द्र केसी
काठमाडौं, ३ कार्तिक । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले प्रमुख राजनीतिक दल र यसका शीर्ष
काठमाडौं, ३ कार्तिक । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी
‘देउवाको सय दिनमा तीन महिना त षड्यन्त्रमा बित्यो’ : डा. सुन्दरमणि दिक्षित (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ३ कार्तिक । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले नेपालका सबै दलका नेताहरु फेल
बाढीपहिरोले घरबारविहिनलाई सरकारले ३ देखि ५ लाख दिने
काठमाडौं, ३ कात्तिक । सरकारले बाढीपहिरोले घरबारविहिनलाई राहतको घोषणा गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको
सरकारद्वारा बाढीपहिरो पीडितलाई राहत घोषणाः मृतकका परिवारलाई २ लाख
काठमाडौं, ३ कात्तिक । सरकारले बाढीपहिरो पीडितलाई राहतको घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले राहत
काठमाडौं, ३ कात्तिक । बाढी पहिरोको बितण्डामा सरकार ।
प्रचण्डलाई च्याँखेको संज्ञा दिदै ओलीले भनेः चुनाव पछि समाप्त हुन्छन्
काठमाडौं, ३ कात्तिक । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुको चुनावी प्रतिष्पर्धा नेपाली काँग्रेससँग
बेमौसमी वर्षाको बितण्डा (फोटोफिचर)
आशिष खनाल, इलाम । बैमौसमी वर्षाले इलाममा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांक
एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवामाथि खनिए भीम रावल
काठमाडौं, ३ कार्तिक । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले एमसीसीको विरोध गर्नेहरुलाई
काठमाडौं, ३ कार्तिक । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तर प्रदेशको कुशीनगर जिल्लास्थित कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको